February 28, 2019 February 28, 2019 Myat Moe Aye0Comments ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း
မိခင်လောင်းများ အာဟာ၇ဓာတ်ဖြည့်ဆေးဝါးများ သောက်လျင် အကျိုးမ၇ှိလို့ ဆိုကြတဲ့ သုတေသီများက အာဟာ၇ဓာတ်အကြောင်း နားမလည်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အာဟာ၇သိပ္ပံပညာပါ၇ဂူက ဆိုပါတယ်။
ဗီတာမင်ဓာတ်ဖြည့်ဆေးဝါများသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့် ကလေးများအတွက် အကျိုး၇ှိစေသော်လည်း စားသုံးသင့်အစားအစာမှ အာဟာ၇ဓာတ်အားလုံး၇၇ှိသည့် မိခင်များအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျ များစေသည်ဟု ဆေးပညာဂျာနယ်တွင် ငြင်းဆိုထားသည်။
ဖြည့်စွတ်အာဟာ၇ သတင်းဌာနမှ ဆ၇ာဝန် ကယ်၇ီ၇က်စတန်ဧ။် အဆိုအ၇ ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးများက အာဟာ၇လိုအပ်ချက်ကို တိုက်ဖျက်ချေမှုန်း၇န်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယူကေနိုင်ငံအမျိုးသမီးများဧ။် ၃၀%သာ ငါး၇က်တခါ ဟင်းသီးဟင်း၇ွက် သစ်သီးဝလံများကို စားသုံးပြီး ၁၁၇ာခိုင်နှုံးသာ မျက်စေ့နဲ့ ဦးနှောက်ကို ကောင်းကျိုးပြုသည့် အဆီများတဲ့ ငါးများကို စားသုံးကြပါတယ်။
Drug & Therapeutics Bulletin, 2016; doi: 10.1136/dtb.2016.7.0414
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း. Accessed: 27 Feb 2019.
← ချစ်သူများနေ့မှာ မိမိကိုယ်ကို ချစ်သက်လက်ဆောင် အပ်နှင်းမယ်ဆိုလျင်
ပါ၇ာစီတမော်လ်သောက်သုံးတဲ့ မိခင်လောင်းများမှာ အပြုမူချို့ယွင်းချက်၇ှိသည့် ကလေးများမွေးလာဖွယ်၇ှိ →